WordPress: Fursadda # 1 ee goob kasta WAA IN AY leedahay | Martech Zone
Khamiis, Janaayo 4, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maanta boggeygii waa la dumiyey !!! Ma hubo noocyada spambots-ka ee i qabsaday, laakiin waxay dili jireen mareegtayda maalintii oo dhan. Kuwani waa faallooyin spam-bots ah oo iskudaya marar badan si ay u soo gudbiyaan faallooyinka Spam. WordPress wax difaac ah kama haayso weerar noocan ah. Iyo Akismet kaliya waxay caawineysaa KADDIB soo gudbinta faallooyinka faallooyinka.
Waxaan ubaahanahay wax asal ahaan diidi kara boostada waana taas waxa saxda ah Dabeecad Xun plugin sameeya.
Waa tan burburka waxa ay qabato:
Habdhaqanka Xun waa nooc ka mid ah qoraallada PHP oo ka horjoogsanaya spambots inay soo galaan goobtaada iyagoo falanqeynaya codsiyadooda dhabta ah ee HTTP iyo isbarbardhigaya astaamaha laga helo spambots la yaqaan. Waxay aad uga sii dhaafaysaa User-Agent iyo Referer, hase yeeshe. Akhlaaqda Xun waxaa loo heli karaa dhowr xirmooyin softiweer ah oo ku saleysan PHP, sidoo kale waxaa lagu dhex dari karaa ilbiriqsiyo qoraal kasta oo PHP ah
Rakibaadda Plugin-ku waxyeello ma lahayn boggeyguna dib ayuu u soo laabtay. Dhacdo ahaan, Dabeecad Xun horeyba wuu xayiray 50 gudbis tan iyo markii aan rakibay 10 daqiiqo kahor. Boggeygu horeyba wuu u fiicnaaday tan iyo markii hawsha keydka xogta ay aad u hoosayso. Sidoo kale, safkeyga Akismet ma buuxin doono sida ugu dhaqsaha badan hadda.
Waxaan dhex maray mid kasta oo ka mid ah boggaga macmiilkayga caawa oo aan rakibay Dabeecad Xun plugin. Ma doonayo inay haystaan ​​maalintii oo kale ee aan haystay! Waxaan sidoo kale maskaxda ku hayaa tiknoolajiyada kale, Dabeecad Xun waxay u horumarisay tikniyoolajiyadooda barnaamijyo badan oo kala duwan.
Fadlan ha ilaawin inaad labo doollar ku tuurto dadkaas sidoo kale. Waxaan kuu sheegi karaa in maqnaanshaha maanta ee 4-ta bog ee aan kor u qaaday ay igu kalliftay 90% dakhligayga caadiga ah ee maalinlaha ah so (marka ma awoodi kari waayey Starbucks-kayga maanta!)
Cusboonaysiinta: 1/8/2007 - Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa arrin ka hadlay halka loo diidayo isku xirka bogga soo galitaanka. Markii aan dib u eegay labo bog oo kale, waxaan ogaaday in Habdhaqanka Xun uu sidoo kale leeyahay dhisme Whitelist ah. Xaqiiqdii waa inaad wax ka beddesho feyl, hudheel.inc.php, oo ku dar cinwaanka IP-ga ee laga xayiray cinwaanno IP ah.
Haddii aadan hubin cinwaanka IP-ga ee la xannibay, waxaan awooday inaan su'aalo xog-ururinta adoo adeegsanaya weydiintan:
KA XUL * * KA 'wp_bad_behavior` halkaas oo' cod_uri` like '% login%'
Tags: dhaqan xumoliiska madowfaallooyinka blogfaallooyinka faallooyinkafaallooyinka spamnaqshadeeye
Jan 6, 2007 saacadu markay ahayd 1:22 PM
Iyo sanad wanaagsan oo wanaagsan. Waxaan kuugu hambalyeynayaa sameynta 100.000 ee ugu sareysa!
Waad ku mahadsan tahay inaad i xasuusiso dhaqanka xun. Waxaan u maleynayay inaan rakibay oo xoogaa iga adkaatay xaddiga faallooyinka spam ee aan helay maalmihii ugu dambeeyay. Sidoo kale, anigoo fiirinaya tirakoobkeyga (aad uga hooseeya taada), waxaan ogaaday in wax badan oo ka mid ah taraafiggeyga baloogyadu ay ka yimaadeen biraawsar aan kalsooni lahayn; Spam khayaanada si kale loo dhigo.
Askimet wuxuu xannibayay ilaa 70 isku day faallo maalin kasta maalmihii la soo dhaafay.
Sikastaba, markaan aqriyo maqaalkaaga, waxaan laba jibaaray goobaha blogka, iyo - qaladkii habbeen dambe dhacay - waxaan arkay inaan ilaaway inaan dhaqaajiyo fiilada sidoo Hadda way socotaa waxaanan xiiseynayaa sida tirakoobka u socon doono.
Jan 8, 2007 saacadu markay ahayd 11:54 PM
Waad ku mahadsantahay inaad ii tilmaamayso fiiladan 'Doug'. Waxaan arkay spam-kayga faallooyinka oo si weyn hoos ugu dhacaya tan iyo markii aan rakibay.
Jan 12, 2007 saacadu markay ahayd 1:23 PM
waxaan doorbidayaa spam karma 2.2
Jan 22, 2007 saacadu markay ahayd 2:50 PM
Waxaan maqlay in qaar ka mid ah dadka wax qora ee wax qora ay waxoogaa dhibaato ah kala kulmeen furitaanka, hoos u dhigista nidaamkooda, taasoo keentay culeys dheeraad ah oo saarnaa serverka.
Halkan waxaa ah barnaamij-yaqaan ka shaqeynaya meel kale oo ka hortagga spam-ka ah: